Vao haingana, olona marobe no manomboka mieritreritra ny fahasalamany. Ny sakafo mahasalama, ny fihenan-tsakafo, ny sakafo sy ny fanatanjahantena dia manampy amin'ny fanamafisana ny vatana ary mahatonga ny tarehimarika hahasarika kokoa. Mba hitazonana ny vatana amin'ny endriny, ilaina isan'andro ny fampiasana ara-batana, saingy indrisy, ny ankamaroan'ny olona dia tsy afaka mitsidika ny toeram-pisakafoanana tsy tapaka, ary amin'ity indray mitoraka ity dia misy ny làlan-kaleha - ny kilasy amin'ny mpanatom-pahefana ao an-tokantrano.
Mpanamboatra ny matihanina ho an'ny tokantrano dia malaza eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ireo solontenan'ny antsasaky ny maha-olombelona, ​​ity fitaovana ara-panatanjahantena ity dia hanampy amin'ny fanamafisana ny toerana misy ny olana ary hahatonga ny vatana hivoatra kokoa, ary ny solontenan'ireo mpampiofana ara-panatanjahan-tena matanjaka dia hanampy amin'ny fanatanjahantena ara-panatanjahantena. Mba hahatratrarana ny vokatra fara-tampony dia mila miatrika tsara sy tsy tapaka ianao. Misy safidy maromaro ho an'ireo mpanatontosa herinaratra ho an'ny tokantrano, hevero ny tsara indrindra:
1. Mpampianatra matihanina matihanina ho an'ny tokantrano. Miasa amin'io simulator io, misy vondrona misy hozatra maromaro mandray anjara, ka afaka mitondra ny vatanao araka ny filaharany ianao, manamboatra elastic kokoa sy manondraka ny hozatra. Ny fametrahana ireo fitaovana maro samihafa dia ny tsy fisian'ny toerana be loatra, mba hahafahan'izy ireo mipetraka ao anaty efitrano kely.
2. Mpanazatra matanjaka ho an'ny tokantrano. Io simulator io dia mety ho an'ireo izay tsy manana vola be ary tsy afaka mividy lafo vidy. Ankoatra ny vidin'ny simulator, dia mora ihany koa ny mamongotra sy manangona, maka toerana kely. Natao ho an'ny olona izay nanomboka nanomboka nilalao fanatanjahan-tena vao haingana ny simulateur toy izany, hanampy azy "hampiakatra" ilay sary ary hanampy amin'ny feo vitsivitsy ao amin'ny vondrona.
3. Fahaizana manerantany ho an'ny tokantrano ho an'ny tokantrano. Ny simulateur toy izany dia antsoina hoe station, maro dia malaza mihitsy aza izy ireo eny anivon'ireo mpilalao matihanina. Ireo simulators dia manana habe kely kely, noho izany dia mety tsara ny fametrahana ao an-trano. Ireo kilasy amin'ny mpampianatra matihanina manerantany dia hanampy amin'ny fampiofanana ny antokon'olona rehetra. Io toeram-piompiana ara-panatanjahan-tena io dia manatanjaka ny fampahalalam-baovao, manamaivana ny hozatry ny rambony sy ny feny, mandrisika ny fampandrosoana ny fandrindrana , manome lanja ny hozatry ny lamosina sy ny tanana, manofana ny fo. Ny endriky ny multi-station ao an-trano dia ahitana:
latina ho an'ny biceps;
mitsivalana mihidy ho fihoaram--dehibe;
Ireo mpampianatra matihanina manerantany ho an'ny tokantrano dia tena mora amin'ny fianarana, satria afaka manao asa maro samihafa izay tsy mitaky fanofanana manokana na fanaraha-maso ny mpampianatra. Ny hany zavatra mety ho fahasarotana dia ny safidin'ny entana, saingy amin'ny farany dia ho takatrao ny fomba anaovana izany, mazava loatra, mazava ho azy, ny manontany amin'ny manam-pahaizana. Tombontsoa be izany Ny kianjan'ny fanatanjahantena dia izy ireo dia tsara ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Ahoana no fomba hifidianana ny simulateur ho an'ny tokantrano?
Voalohany indrindra, mila mifidy simulateur ianao mifototra amin'ny haben'ny efitranonao, tsy maintsy manapa-kevitra mialoha ianao hoe aiza no hametrahana fitaovana ara-panatanjahantena sy ny habetsahan'ny toerana omenao azy.
Faharoa, maniry ny hanandrana toy izany ny hery mpanamory toy izany ao amin'ny gym mba hahazoana antoka fa ity fitsangatsanganana ara-panatanjahantena ity dia mifanaraka aminao ary mety amin'ny fanaovana izany.
Fahatelo, alohan'ny handoavanao ny simulateur voafidy, mila manamarina ianao na manana rafitra matanjaka, azo antoka azo ampiasaina, sns.
Fanatanjahantena ho an'ny ambadiky ny dobo
Masolotry fanosotra elliptika
Ahoana no hanombohana yoga ao an-trano amin'ny scratch?
Zumba ho an'ny lanjany
Fanazaran-tena ao amin'ny dobo ho an'ny fahavoazana
Fanatanjahan-tena ho an'ny fahavoazana amin'ny fako
Fihetsika ho an'ny ankizivavy ao an-trano
Inona no tsapan'ny tendany?
Maritime fampakaram-bady - fanoratana
Ireo vokatra misy lactose
Boots gum mavo
40 Fomba Tsara Indrindra Amin'ny Taombaovao
Miniature Schnauzer - karazana karazana
Inona ny tovovavy toy ny zazavavy?
Kylie Jenner dia nankafizin'ny fety nahaterahan'i Christina Aguilera
Kely mandritra ny torimaso amin'ny zaza
Montbretzia - fambolena sy fiahiana
Ahoana ny hanatsarana ny satsivi?
Clutches - novokarin'ny lamaody
Electro-cleaner ho an'ny fanesorana ranomandry